Blog | Prasad Foundation Inc.
Charity - February 17, 2020
शशि पन्थी भैरहवा, २ फागुन । रुपन्देही सेवा समाज टेक्ससास अमेरिकाले शुक्रबार सिद्धार्थ बालगृह भैरहवालाई नगद ३० हजार सहयोग गरेको छ । सिद्धार्थ बालगृहका सञ्चालक कृष्णमाया गुरुङलाई सो रकम समाजका अध्यक्ष जगदिश न्यौपाने र शिक्षाविद् बालकृष्ण भट्टराईले संयुक्त रुपमा हस्तान्तरण गरे । सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्दै प्रमुख अतिथि भट्टराईले समाजका अध्यक्ष न्यौपानेले गरेको पुण्य कामको प्रशंसा गरे । उनले बालबालिकालाई अध्ययनमा लाग्न सुझाव पनि दिए । रुपन्देहीबाट अमेरिका गएर बसेका नेपालीहरुले देउसीभैलो खेलेर बचेको पैसा नेपालमा आएर बालगृहमा रहेका बालबालिकालाई सहयोग गरेको अध्यक्ष न्यौपानेले बताए । यस अघि अमेरिकामा बस्दै आएका प्रसाद फाउण्डेशनका अध्यक्ष पुण्डरी अर्यालद्धारा पनि बालगृहलाई सहयोग गरेको प्रेरणाले यो गर्न उत्साह मिलेको उनले बताए । फाउण्डेशनका अध्यक्ष अर्यालद्धारा हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको दुई जना बालबालिकालाई ६ हजारका दरले १२ हजार छात्रवृति पनि कार्यक्रममा हस्तान्तरण गरिएको थियो । सो अवसरमा तिलोत्तमा नगरपालिका–८ निवासी अंकित मेडिकल हल बुटवलका सञ्चालक कृष्ण न्यौपानेले पनि बालगृहलाई नगद ५ हजार सहयोग गरे । उनले बालगृह सञ्चालनमा केही सहयोग गर्न इच्छा लागेकाले सो सहयोग गरेको बताए । कार्यक्रममा बालगृह सञ्चालक कृष्णमाया गुरुङले विभिन्न आरोह अवरोहका बीच गरेर बालगृह यहाँसम्म पुगेको बताइन् । उनले सहयोग गर्नेलाई आभार व्यक्त गरिन् । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रेस क्लबका कार्यसमिति सदस्य शंकर पाण्डेले सञ्चारको क्षेत्रबाट बालगृहलाई सक्दो सहयोग गर्ने बताए । साहित्यकार रुद्र ज्ञवालीको सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । बालगृह ८ वर्षअघि देखि लुम्बिनीरोडमा सञ्चालनमा आएको हो । बालगृहमा हाल १९ जना बालबालिका रहेका छन् ।
१४ पौष २०७५ तदनुसार २९ डिसेम्बर २०१८ शिद्धार्थनगर, भैरहवा प्रसाद फ़ाउण्डसन यु एस ए को आयोजनामा १४ पुष २०७५ शनिवारका दिन रुपन्देहीको भैरहवामा सहयोग तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न भयो। सिद्धार्थ बाल गृहको सभा हलमा आयोजित सो कार्यक्रममा सिद्धार्थ बाल गृहका बाल बालिकाहरुका लागि सहयोग स्वरुप साइकल प्रदान गरिएको थियो। समाजसेवी कृष्ण कुमारी गुरुङको एकल प्रयासमा संचालनमा रहेको सिद्धार्थ बालगृहमा हाल १८ जना असहाय बालबालिकाहरुले आश्रय पाइरहेका छन्। ति बालबालिका को पढाइ र संरक्षणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सो बाल गृहले बहन गर्दै आएको छ। बाल गृहका संचालक कृष्ण कुमारी गुरुङका अनुसार सरकारी स्तरबाट असहाय शिशु हस्तान्तरण गर्नु बाहेक हालसम्म कुनै किसिमको आर्थिक या भौतिक सहयोग प्राप्त भएको छैन। संचालकको प्रयास र सहयोगी दाताहरुको सहयोगबाट सो बाल गृह संचालन हुँदै आएको छ। संचालक कृष्ण कुमारी गुरुङका अनुसार उनका बाबा आमा युकेमा बस्नु हुन्छ र उहाँलाई उतै बोलाइ रहनु भएको छ। तर संचालिकालाई आफ्नो सुख सुविधा भन्दा बालगृहमा आश्रित असहाय बालबालिका प्रतिको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण लाग्छ। त्यसैले उहाँ बेलायतको सुख सुविधा त्यागेर असहाय बालबालिकाको उद्दारमा लाग्नु भएको छ। उहाँको यो उक्त सेवाको सम्मान गर्दै प्रसाद फ़ाउण्डेसनले “प्रसाद समाज सेवा सम्मान” बाट सम्मानित गरेको छ। ले बाल गृहका छात्रा सुमित्रा भण्डारी र संगीता मल्लाहालाइ १२ कक्षासम्म अध्ययन गर्नको लागि वार्षिक रु ६००० का दरले छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने घोषणा गर्दै यस वर्षको छात्रवृति वापतको चेक रकम हस्तान्तरण समेत गर्नु भयो। प्रसाद फ़ाउण्डेसन कि लक्ष्मी अर्याल, शहिद स्मृति पुस्तकालय सिद्धार्थनगरका तारा प्रसाद शर्मा, शान्तिदीप सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाका बसन्त मणि पोखरेल, मानव अधिकारकर्मी भिष्म पन्थी, लुम्बिनी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका गीता शर्मा र सोहि संस्थाका भीष्मा पोखरेल लगायतको उपस्थिति रहेको सो कार्यक्रमको अध्यक्षता फ़ाण्डेशनका अध्यक्ष पुण्डरी अर्याल र संचालन साहित्यकार रुद्र ज्ञवालीले गर्नु भएको थियो। यस कार्यक्रमको पुरै छायांकनको जिम्मा भने साझा टिभी का प्रतिनिधि विप्लप पोखरेलले गर्नुभएको थियो। विस्तृत जानकारीको लागि तलको भिडियो हेर्नुहोस्
Culture & Heritage - August 31, 2017
Search THURSDAY , AUGUST 31 2017 मुख्य पृष्� ePaper-New Yorkहाम्रो बारेसम्पर्क Search Vishwanews.com : Popular Nepalese News Media in New York, USA Home / News / प्रवास / प्रसादको दोस्रो साधारणसभा प्रसादको दोस्रो साधारणसभा July 5, 2017 प्रवास Leaveacomment inShare न्यूयोर्क । प्रसाद फाउण्डेसनले न्यूयोर्क, ज्याक्सन हाइटस्थित थकाली किचन हलमा दोस्रो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ । साधारणसभामा कन्सुलर कार्यालय, नेपालका प्रमुख पुष्पराज भट्टराई र न्यूयोर्क सिटि क्विन्सका मोहन ज्ञवालीको उपस्थिति थियो । संस्थापक अध्यक्ष पुण्डरी अर्यालले फाउण्डेसनको स्थापना गर्नुका कारण र आवश्यकताबारेमा प्रष्ट पारेका थिए । केही वर्षअगाडि कलेजो प्रत्यारोपण गरी पुनर्जीवन पाएका अर्यालले बाँकी जीवन सकारात्मकरुपमा सामाजिक कार्य अगाडि बढाउन फाउण्डेशनको स्थापना गरिएको बताए । अर्यालले जीवनमा सबैभन्दा संवेदनशील बालक र वृद्ध अवस्था भएको जनाउँदै ‘खुसी र स्वस्थ जीवन’का लागि सिनियर सेन्टरको आवश्यकता महसुस गरेर संस्थाको स्थापना गरिएको बताए । संस्थाको प्रगति विवरण सुनाउँदै उनले नेपालमा बाल आश्रम र वृद्ध आश्रममा रहेका बालक र वृद्धवृद्धाहरुका लागि अक्षय कोषको स्थापना गर्नेसमेत बताए । बोर्ड सदस्य डा. कमलराज पाण्डेले सिनियर सेन्टर हाम्रा लागि अति आवश्यक भएको बताउँदै रिटायर्डपछि अरु सक्रियरुपमा लाग्ने अठोट लिए । ePaper-Texas © Copyright Vishwanews.com : Popular Nepalese News Media in New York, USA 2017, All Rights Reserved
Uncategorized - July 5, 2017
न्युयोर्कमा नेपालीका लागि सिनियर सेन्टर बनाउने अभियान तीब्र
Culture Heritage events - July 3, 2017
समाचार प्रसाद फाउन्डेसनको दोश्रो साधारण सभा सम्पन्न । समाचार प्रसाद फाउन्डेसनको दोश्रो साधारण सभा सम्पन्न । By Pundary Aryal July 2, 2017 FacebookTwitterGoogle+Share प्रसाद फाउन्डेसनको दोश्रो साधारण सभा सम्पन्न । जुलाई ०१, २०१७ न्यु योर्क, ज्याक्सन हाइट थकाली किचनको हलमा प्रसाद फाउन्डेसनको दोश्रो बार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । उक्त कार्यक्रममा नेपाल कन्सुलर अफिसका प्रमुख श्री पुष्प राज भट्टराइ ज्यु र न्यु योर्क सिटि क्विन्सका नेपाली कम्युनिटी लिडर श्री मोहन ज्ञवालीज्यु उपस्थिति रहेको थियो । उक्त कार्यक्रममा फाउन्डेसनकि सिता खरेलले कार्यक्रम संचालन गर्नु भएको थियो । संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष पुण्डरि अर्यालले यो फाउन्डेसन (सस्था) स्थापना गर्नुको कारण र आबस्याकता बारेमा बोल्नु भएको थियो । पुण्डरी अर्यालको केहि बर्ष अगाडी कलेजो प्रत्यारोपण गरि आफ्नो पुनर्जिबन पाएको हुनाले अबका बाँकी जिबन सकारात्मक सामाजिक कार्यमा निरन्तर लागि रहने अठोट गरि यो प्रसाद फाउन्डेसनको स्थापना गरिएको कुरा स्मरण गर्दै, फाउन्डेसनको “ खुशी र स्वास्थ जिबन” भन्ने दृष्टांत राखेर अमेरिका बसेका नेपाली अमेरिकनका सिनियरको लागि सिनियर सेन्टरको स्थापना गर्ने एकल उदेश्य राखिएको नेपालि सयौ संस्था मध्ये एक हो भन्दै वहाले मानव जिबनमा सबै भन्दा संबेदनशिल अबस्था बालक र बृध्द अबस्था हुन । त्यसमा पनि टुहुरा बालबालिका र बेसहारा बृध्दहरुको जिबन कष्टकर नारकीय जिबन बाचेका छन । नेपालमा बाल आश्रम र बृध्द आश्रम रहेका बालक र बृध्दहरुका लागी अझ राम्रो स्तरियबृध्दि बनाउनका लागि नेपालमा एउटा अक्षय कोष स्थापना गर्ने समेत वहाले बताउनु भयो । संस्थाले अहिले सम्म भए गरेका कामको र आय व्यय विवरण सुनाउनु भयो । संस्थाले सबभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि ( ५०१ सी ३ ) कर छुट हुने प्राबधान अमेरिकाको राजस्व बिभागबाट प्राप्त भएको छ । NYC न्यु योर्क सिटी अफिसमा समेत यो संस्थाले आफ्नो पहुच बनाएको र । सिनियर सेन्टरको लागि पहल भैरहेको बताउनु भयो । बोर्डका सदस्य डा. कमल राज पाण्डेले यो सिनियर सेन्टर हाम्रो लागि पनि अति आबस्याक भैसकेको छ, आफुले रिटायर्ड भए पछि अरु सक्रिय भै लाग्ने कुरा बताउनु भयो । बोर्ड सदस्य दिपक प्रधानजीले संस्था भित्रको सिनियर सेन्टर कमिटि अलि सुस्त भयो । हुन् त म पनि त्यति सक्रिय भएको छैन भन्दै सिनियर सेन्टर स्थापनाको लागि सबै सक्रिय हुन् पर्छ भन्नु भयो । बोर्ड सदस्य हरि अधिकारिले सेन्टर आबस्याक भैसकेको भन्नु हुदै आफु पनि सकेको सहयोग र सक्रिय हुने […]
Donor's List - July 3, 2017
07/01/2017 1. Krishna Raj Pandey $ 100.00 2. Kamal Raj Pandey $ 100.00 3. Bishwa Bahadur Shah $ 100.00 4. Purushottam Panthi $ 100.00 5. Pushpa Raj Battarai $ 60.00